Home » Vaovao momba ny fizahantany » Tian'i UNWTO tsy hahomby ny WTTC: Mexico sy Repoblika Dominikanina lalaovin'i Zurab Pololikashvili
Ny fihaonam-be an-tampon'ny WTTC dia kasaina hampivondrona ireo mpitarika indostrian'ny fizahan-tany any Cancun amin'ny 25-27 aprily. Ity hetsika ity dia manana fifaninanana any amin'ny Repoblika Dominikanina ankehitriny noho ny fomba feno fankahalana nataon'ny sekretera jeneralin'ny fizahan-tany manerantany (UNWTO). Tapitra ve ny fiaraha-miasa tena ilaina eo amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany?
Eo an-daniny ny dia sy fizahan-tany. Asa an-tapitrisany no atahorana ary ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia nanambara ny ady atao amin'ny WTTC.
Ilaina maika ny fiaraha-miasa mba hamerenana ny fizahan-tany ho fifandonana noforonin'ny olona iray, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO izay nahatonga an'i Mexico sy ny Repoblika Dominikanina ho voadona.
Aiza no hizoran'ny fizahan-tany miaraka amin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana amin'ny faniriana hanimba ny resadresaka tena ilaina amin'ny mpitondra ambony amin'ny sehatra tsy miankina sy panjakana?
“Tsy adala i Zurab raha nieritreritra an'izao tontolo izao… ratsy fanahy izy… olona ratsy fanahy.”
Ireo no tenin'i Juergen Steinmetz, mpanorina ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary mpanonta ny eTurboNews. Ny fanaovana ankivy ny asa ataon'ny WTTC, dia toy ny tehamaina amin'ireo orinasan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany lehibe indrindra, ireo mpikambana ao amin'ny World Travel and Tourism Council (WTTC).
Gloria Guevara, tale jeneralin'ny WTTC dia nilaza hoe: “Tezitra ny mpikambana ao aminay. Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia manandrana manao ankivy ny hetsika ataonay izao. Sady malahelo aho no sosotra. Ity no fotoana ilàn'ny sehatra fiaraha-miasa ny mpitondra mba tsy hanao ankivy. ”
Global Guevara dia niady toy ny tsy misy olon-kafa hitazomana sy hiasa hatrany ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Teo izy ho an'ireo mpikambana ao aminy nanomboka ny fotoana nitrangan'ny areti-mandringana.
"Tsy dia nitovy ny hevitray sy i Gloria raha ny amin'ny fomba hanoherana an'io krizy io, fa kosa mifanaja izahay," hoy i Juergen. “Ny olona mendrika rehetra dia afaka mahatakatra fa ny fandrosoana dia tsy maintsy tratra mba hiarahan'ny rehetra miasa. Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia mangataka mpitarika lehibe hanatrika hetsika UNWTO natambatra tamin'ny minitra farany tamin'ny andro mitovy amin'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC izay maniratsira tsy ho an'ny WTTC ihany fa ho an'ireo izay mitady hamonjy ity indostria ity sy ny rafitry ny Firenena Mikambana ho manontolo. Miara-mikarakara hetsika toy izany ny Repoblika Dominikanina izay misy orinasa maro mpikambana ao amin'ny WTTC manao raharaha fohy. Ny fizahantany dia ampahany lehibe amin'ny harinkarena faobe ao amin'ny Repoblika Dominikanina, ary tokony ho tombontsoan'ny Governemanta DR ny hanaja izay olona miasa amin'ny tanjona iraisana hamerenana ity indostria manan-danja ity. ”
Gloria Guevara avy any Mexico no tale jeneralin'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) monina any Londres, fikambanana iray misy mpikambana 200+ izay mandrafitra ny orinasa lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany Maro no milaza fa ny WTTC dia misolo tena ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahantany . Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany, UNWTO dia masoivohon'ny Firenena Mikambana ary tokony hisolo tena ny sehatra ho an'ny daholobe. Zurab Pololikashvili, 44 taona, avy amin'ny Repoblikan'i Georgia no sekretera jeneralin'ny UNWTO ankehitriny.
Hatramin'ny faran'ny 2017, ny UNWTO sy WTTC dia niasa toy ny zaza kambana siamese teo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Izany dia teo ambany fitarihan'ny Dr. Taleb Rifai avy any Jordania, satria ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo alohan'ny Pololikashvili no nitantana ity masoivoho ity.
Dr. Taleb Rifai sy David Scowsill
Ny World Travel & Tourism Council dia hita ho fahefana manerantany amin'ny fandraisana anjara ara-toekarena sy sosialy amin'ny Travel & fizahan-tany. Talohan'ny fanovana ny mpitarika UNWTO, ny CEO taloha an'ny WTTC, David Scowsill, ary ny Dr. Taleb Rifai dia efa niara-niasa mba hampivelatra ity indostria manerantany lehibe ity.
Niova izany rehetra izany tamin'ny 1 Janoary 2018, rehefa nandray ny andraikiny i Zurab. UNWTO dia nanjary fikambanana mihidy izay tantanan'ny lehilahy iray mampiasa fandrahonana, ary fizahan-tavan'olona mba hiantohana ny toerany manokana.
Ny fizahan-tavan'olona ho valim-pifidianana no laharam-pahamehana na dia nanomboka nandalo krizy nandrava indrindra aza izao tontolo izao - COVID-19. Tsy mbola nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay navela hanatrika na hametraka fanontaniana ny haino aman-jery tsy mifanaraka hatramin'ny volana Janoary 2018. Nanomboka nahita an'i WTTC ho mpifaninana ny UNWTO fa tsy mpiara-miasa. Tsy noraisina intsony ny sekretera jeneraly teo aloha Dr. Taleb Rifai nanatrika hetsika lehibe toy ny UNWTO General Assembly. Tsy navela hiteny tamin'ny hetsika toy izany i Gloria Guevara ary nipetraka tamin'ny laharana farany izy.
Tsy nijery ny UNWTO intsony izao tontolo izao, fa iza koa no hitodihana any amin'ny sehatra ho an'ny daholobe :? Zurab dia nanao ankivy ny hetsika toa ny World Travel Market, IATA, hetsika ICAO, ary maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, ny olona miasa ao amin'ny UNWTO dia nanambara ny fahasosorany tamim-piafenana, saingy tsy vonona ny hanao fanambarana ampahibemaso izy ireo, satria manahy ny amin'ny asany izy ireo raha milaza zavatra tsy tian'ny Sekretera Jeneraly.
Tamin'ny volana Janoary, Zurab dia nanao izay tsy ahafahan'ny kandidà iray hafa mihozongozona amin'ny fifidianana Sekretera Jeneraly, manome toky fa hitazona an'io anaram-boninahitra io mandritra ny 4 taona. Tamin'ny volana Janoary tsy nanaja ny fanjakan'i Bahrain izy hahazoana ny fombany manokana.
Nisy olona avy ao amin'ny UNWTO nilaza eTurboNews, "Mizarazara be izy ary manao ankivy foana ireo hetsika sy hetsika tsy azy."
Gloria Guevara dia niezaka nanangona ny hetsika manan-danja indrindra ho an'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana hatramin'ny nitrangan'ny areti-mandringana. Ny volana WTTC Summitnext dia natao hihaonan'ny mpitondra fizahan-tany manerantany amin'ny ho avy Fihaonana an-tampony manerantany any Cancun. Manohitra ny tsy fetezana rehetra ary na eo aza ny angon-drakitra COVID-19 vaovao any Mexico ary koa onja Coronavirus fahatelo any Eropa, Brezila ary Afrika, dia tapa-kevitra ny WTTC fa hanao ny Global Summit 2021 ho hetsika mamaky fatratra hametraka ny ho avin'ny Travel & fizahantany amin'ny tsara indrindra mety lalana.
Ny fihaonamben'ny Global WTTC faha-20 nandrasana fatratra, dia nokarakaraina niaraka tamin'ny Governemantan'i Quintana Roo ary hatao any Cancun, Mexico, ny 25-27 aprily 2021. Tsy nisy niantra ny fanaovana an'ity hetsika ity ho azo antoka sy mandaitra ho an'ireo izay manatrika ara-batana na amin'ny fomba manakaiky.
Nilaza ny tompon'andraikitra iray avy any Mexico fa eTurboNews loharanom-baovao fa sosotra ny firenena amin'ny UNWTO sy ny Repoblika Dominikanina noho ny fanodikodinana ity hetsika andrasana fatratra any Cancun ity.
Toy izao no nanombohan'ity fiasco iray manontolo ity.
Tamin'ny volana lasa ho mariky ny fahatokisana ny fizahan-tany Dominikanina dia nanao vakansy tany amin'ny Repoblika Dominikanina niaraka tamin'ny fianakaviany ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili.
Mba hanovana ny fialan-tsasatra ho iraka miasa feno ary azo inoana fa karama indrindra dia nanararaotra nitsidika ny filohan'ny DR Luis Abinader izy tamin'ny andro fitsaharany farany. Nilaza tamin'ny minisitry ny fizahan-tany David Collado izy fa toerana azo antoka hitsidihana ny Repoblika Dominikanina, ary nilaza fa ny Repoblika Dominikanina dia ohatra iray eo amin'ny tontolon'ny fomba fitantanana ny fizahantany miaraka amin'ny protokol tompon'andraikitra amin'ny fotoan'ny COVID-19 mitarika hisarika ny iraisam-pirenena mpizahatany manana fiarovana ara-pahasalamana.
Minisitry ny fizahantany Dominikanina Dominikanina David Collado, ary ny sekretera UNWTO Zurab Pololikashvili
Azo inoana fa nanolotra fanasoavana nifanaiky tamin'ny sekretera jeneraly, ny minisiteran'ny fizahantany ho an'ny Repoblika Dominikanina dia nandefa taratasy tany amin'ireo minisitry ny fizahantany sy ireo mpitarika indostrialy any Amerika, anisan'izany i Etazonia omaly.
Ny taratasy dia mivaky toy izao:
Faly aho fa nandefa fanasana natolotray avy amin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, Andriamatoa Zurab Pololikashvili, ary ny minisitry ny fizahan-tany an'ny Repoblika Dominikanina, Andriamatoa David Collado, hanatrika ny fivorian'ny minisitry ny fizahantany any Amerika, natao ny 26 hatramin'ny 28 aprily 2021 tao Punta Cana, Repoblika Dominikanina.
Departemantam-paritra ho an'i Amerika
Androany ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Repoblika Dominikanina dia niaro ilay fanasana nilaza fa manana daty hafa izy ireo amin'ny fivorian'ny roa tonta nifanarahan'izy ireo nandritra ny fetin'ny fianakavian'i Zurab niasa. Zurab Pololikashvili no nangataka tamin'ny herinandro lasa mba hanova ny datin'ny fivoriana amin'ny daty mitovy amin'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC.
Manome safidy izao hijerena izay miaraka amin'ny UNWTO sy izay miaraka amin'ny WTTC. Safidy mangidy izany satria ny fizahan-tany dia iray amin'ireo sehatra mahomby indrindra amin'ity krizy eran-tany ity. Ireo mpitondra fizahantany dia mety tsy ho eo intsony ao anatin'izany.